Aaron Ramsey oo xagaaga ku wajahan koox ka mid lixda waaweyn ee Premier League – Gool FM
Aaron Ramsey oo xagaaga ku wajahan koox ka mid lixda waaweyn ee Premier League
(Turin) 23 Maarso 2021. Laacibka khadka dhexe kaga ciyaara kooxda Juventus ee Aaron Ramsey ayaa lagu soo warramayaa inuu ku laaban doono horyaalka Premier League isagoo lala xiriirinayo kooxda Liverpool.
30-sano jirkan ayaa weheshaday kursiga keydka ee shaxda Macallin Andrea Pirlo, isagoo kusoo bilawday kaliya 12 ka mid ah 27 kulan oo ay kooxda Juve ka ciyaartay horyaalka Serie A.
Kubbad qaabeeyaha reer Wales ayaa Juventus uga soo biiray kooxda Arsenal isagoo bilaash ku yimid Turin xagaagii 2019, hase ahaatee, tan iyo markaas waxa uu ahaa xiddig aan muuqasho wacan ku lahayn Bianconeri.
Si kastaba ha ahaatee, Ramsey ayaa lala xiriirinayay inuu ku laaban karo Gunners, balse waxay haatan wararku sheegayaan inuu u safri doono Anfield si uu kaga mid noqdo Liverpool.
Reds ayaa xagaagan dadaal u geli doonta soo qaadasha xiddig khadka dhexe ka ciyaara maadaama uu qaab bilaash ah kaga tago Georginio Wijnaldum kaasoo lasoo warinayo inuu heshiis la gaaray Barcelona.
Jariiradda Calciomercato ayaa warineysa in kooxaha Liverpool iyo West Ham ay ku dagaallamayaan saxiixa Ramsey oo aan dookh muhiim ah ka ahayn Allianz Stadium.
Marka laga soo tago qiimihiisa, mushaharkiisa iyo imaanshaha Griezmann, maxay tahay sababta kale ee ay Barcelona isaga diidday saxiixa Neymar Jr?
"Messi waa inuu ka fikiraa tiisa oo kaliya!" - Xiddig ka tirsan Barcelona